Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. #rashifal – Page4– Janata Live
मेष – कार्य क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक, साहित्य, संगीत आदिसित सम्बन्धित काममा सफलता मिल्नेछ । असल भावनाले युक्त कार्य शुभ र सफलता दायक रहनेछ । इष्टमित्र र सन्तानको सुख बढ्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । मान–पुरस्कार मिल्नेछ । धनसम्पत्ति बढ्नेछ । सुखशान्ति बढ्ला । साझेदारीको काम बन्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । प्रसिद्धि र ख्याति फैलिनेछ । हांसविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । बृष – सुख शान्ति बढ्नेछ । यात्रा होला । धन समृद्धि बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । विजयश्री मिल्नेछ । आफन्तको सहयोग पाउनुहुनेछ ।...
बुढानिलकण्ठको दर्शन गरेर सुत्नुहोला ! बुढानिलकण्ठले सबैको रक्षा गरुन्, हर मनोकामना पुरा गरुन्
मेष राशि – लाभ, हानी, आय, व्यय, सुख, दुःख बराबरी मध्यम खालको दिन छ । आत्मबल बढाएर काम गरेमा असफल भइँदैन । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्ने छ । बृष राशि – महिला वर्गबाट विशेष सहयोग मिल्ने छ । परिश्रम गर्दा धनार्जन हुनेछ । शिक्षामा सफलता मिल्ने छ । शेयरको कारोवारमा सफलता मिल्ने छ । मिथुन राशि – वैदेशिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्ने छ । सामाजिक कार्यमा मन जाला । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्ला । दैनिक कार्यमा प्रगति हुनेछ । कर्कट राशि – शुभकार्यको चर्चा चल्ने छ । मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउने छ । विशिष्ठ व्यक्तिको साथ पाईनेछ । छोटो...
आज बिहिबार बुढानिलकण्ठको दर्शन गरि आफ्नो राशिफल हेर्नुहोला । तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –स्वास्थ्य अरूसित आनन्द बाँडेर फुल्छ। तपाईंका हातबाट सजिलै धन खर्च भए तापनि – तपाईंका भाग्यशाली ताराले आर्थिक लाभ बनाइ रहनेछन्। परिवारको वातावरण बिग्रिन्छ। प्रेम सधैं आत्मीय हुन्छ, र तपाईंले यसलाई आज अनुभव गर्नु हुनेछ। तपाईंमा नेतृत्वको गुण र मानिसहरूको आवश्यकताबारे संवेदनशीलता छ – तपाईंको साँचो परिचय प्रस्तुत गर्नाले तपाईंलाई राम्ररी जीत गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंको मनमा भएको कुरा भन्न नडराउनुहोस्। तपाईंका जीवनसाथीको आन्तरिक सौन्दर्य आज बाहिर निस्किनेछ। बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) –तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम...
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –कमजोरीले चिन्ता बढाउन सक्छ । स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने परिस्थिति बन्नेछ । नयाँ काममा हात हाल्नु हानिकारक हुनेछ । मिहिनेत गरे पनि अन्त्यमा काम नबन्नाले दिक्क लाग्ने छ । मनमा निराशा र वैराग्यका भावना मँडारिने छन् । गोपनीयता भङ्ग हुने खतरा छ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) –जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ । प्रेम वा मित्रताको बन्धन कसिनेछ । प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ । दाम्पत्य जीवन रमाइलो रहनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । व्यवसायमा लाभ लिने...
भक्तिभावले गणेश जीको दर्शन गरेर आफ्नो राशिफल पढ्नुहोस्, मनोकामना पुरा हुनेछ । ईन्कार नगरौं हैं
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)घरायसी सुखसुविधा बढाउने कुनै महँगो वस्तुको किनमेल गर्न मन लालायित हुनेछ । यात्रा लाभप्रद बन्न सक्छ, धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन । दिनभरि मन प्रफुल्ल रहनेछ । शान्त र रमाइलो वातावरणको सिर्जना हुनेछ । व्यवहारिक र व्यवसायिक चिन्तनका लागि उपयुक्त समय छ । घरायसी सुखसुविधा र मायाप्रेमका लागि समय निकाल्नु पर्ने देखिन्छ । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा)व्यापाररव्यवसाय मध्यम रहेको छ । ज्ञान र चिन्तन उपयोगी बन्नसक्छ । बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलाप दिन बित्नेछ । तर साँझदेखि प्रतिकूल समय सुरु हुनसक्छ । आर्थिक समस्याले सङ्कट उत्पन्न...
भाग्यमानीले मात्रै देख्ने जिउदो दाहिने शंख, फोटोमा छोएर ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस् ७ दिन भित्र तपाईंको भाग्य बद्लिनेछ
तपाईंको दिन शुभ रहोस् मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –हेलचेक्र्याइले काममा उल्टो परिणाम दिन सक्छ, सचेत रहनुपर्ला । आलस्य र थकानको अनुभूति हुनेछ । झुटा आरोपपनि लाग्न सक्छ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) –धर्म, तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहने छ । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) –आज सानो भूलका कारण अपमानित बन्न सक्नुहुन्छ । गरेका काममा ढिलासुस्ती हुनेछ । आर्थिक कारोवारमा मन्दी आउने छ । कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि,...
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)तर्क, विवाद र बहसमा विजयी भइने छ । आशा गरेअनुरूप सहयोगी जुट्ने छन् । गरेको प्रयासमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई पालना गर्दा खुसी र उमङ्गको वातावरण बन्नेछ । सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ । व्यापार–व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ । दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो)पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट लाभ उठाउन सकिने छ । पढाइमा त्यति समय दिन नसकिए पनि नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । व्यापारमा सामान्य फाइदै हुनेछ । श्रमको उचित मूल्यांङ्कन हुनेछ । आम्दानी...
मेष राशि – नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ । दिनको उत्तरार्ध अधिक सुखद् रहने छ । शुभकार्यको चर्चा चल्ने छ । प्रेम प्रस्ताव समेत प्राप्त हुनसक्छ । बृष राशि – धार्मिक कार्य सफल रहने छन् । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्ने छ । बौद्धिक काममा सफलता मिल्ने छ । प्रेम सम्बन्ध कसिलो होला । मिथुन राशि – आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । नयाँ कमको थालनी हुनेछ । धार्मिक यात्राको योग छ । सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै लाभ हुनेछ । कर्कट राशि – व्यवसायका लागि यात्राको सम्भावना पनि छ । आफन्त वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्ने छ । ठीक समयमा सही...
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)भाइबहिनी वा सन्ततिका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने छ, सन्ततिका लागि केही धनराशि खर्च हुने सम्भावना छ । पारिवारिक वातावरण अनुकूल नहुनाले दिक्क लाग्न सक्छ । आर्थिक मामिलामा नराम्रो छैन । बौद्धिक र सृजनात्मक क्षमता ह्रास आएको अनुभूति भए पनि पठनपाठन र ज्ञानगुनका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्ने छ, आजको चिन्तनले थोरबहुत काम गर्नेछ । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा)सानातिना पारिवारिक समस्यामा रुमल्लिनु पर्ने छ । शरीरमा थकानको अनुभूति हुनसक्छ तथापि घरपरिवार, पारिवारिक सुख, मान्यजनको सेवासुश्रुषामा समय बितेको पत्तो पाउनुहुन्न । विदेश वा प्रवासमा बसेर कामधन्दा र व्यवसाय गर्नेहरूले राम्रो...